Digital Marketing & Mmetụta nke Video | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 10, 2014 Douglas Karr
N'ụtụtụ a, anyị nyefere ndị ahịa anyị akụkọ nke anyị na ha nọ kemgbe afọ ole na ole. Ha nwere nnukwu saiti nke riri elu na ahia ichoro kwesiri ihe kariri 200% karia afo gara aga ma ha nwere otutu infographics na ocha ka ha rata ndi choro ka ha deba aha ha ma bido leba anya na uzo ha. Naanị ihe anyị na-achọta na saịtị ha bụ ọdịnaya vidiyo. Anyị maara, na mbụ, vidiyo ahụ bụ ihe achọrọ ugbu a maka ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ ịsọ mpi n'ịntanetị.
a ozi sitere na ndị na-akọwa vidiyo egosipụta a kpam kpam doro picture na-akwanyere mmetụta nke video na gị n'ozuzu dijitalụ ahịa. The stats na-eju anya:
63% nke ndị isi ụlọ ọrụ gara na saịtị ndị na-ere ahịa mgbe ilere vidiyo.
Vidiyo na saịtị mkpọsa mere ka ndị ọbịa nwee nkezi nke 2 nkeji oge, gbanwee 30% karịa ma mụbaa nkezi ire ere site na 13%.
68% nke ndị na-ere ahịa kachasị elu ugbu a jiri vidiyo dị ka akụkụ nke atụmatụ ịzụ ahịa dijitalụ ha.
Ihe nlezianya vidiyo na-eme ka ohere nke ika gị dị na ihu ihu nke Google nsonaazụ ọchụchọ site na ugboro 53!
85% nke ndị ahịa nwere ike ịzụrụ mgbe ha kirisịrị vidiyo vidiyo.
Tags: digital marketingvidiyo ecommercenkọwa videonkọwa vidiyonkọwaVidio Ahịavidiyo vidiyovidio mkpọsavideo mgbanwe ọnụegovidiyo
Isi ihe kpatara nke a na-achọ bụ n'ihi na ọgbara ọhụrụ anyị na-eto. Onye ọ bụla nwere smartphones ebe ha nwere ike ịlele vidiyo na njem. Ma ebe ọ bụ na ha na-ekwenye n'ezie n'ihi aesthetics na ihe ndị ọzọ, ndị mmadụ na-achọkarị ịzụta ihe mgbe ha kirisịrị vidiyo. Nnukwu ederede site na ụzọ, ọbụlagodi na ọ bụ nke ochie.